Liiska Kooxaha Doonaya Arsene Wenger Oo Sii Kordhaya & Tababaraha Ree France Oo Markan Looga Yeedhayo Koox Weyn Oo Horyaalka Talyaaniga Ah – GOOL24.NET
October 28, 2018 Apdihakem Omer Adem
Tababarihii hore ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa u muuqda mid helaya xiiso badan oo uga imanaya dhinaca kooxaha kala duwan ee ugu heerka sarreeya dunida kubadda cagta wakhti xaadirkan.
Wenger ayaa shaqada tababarenimo ka maqnaa tan iyo markii uu iskaga tagay Gunners dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore waxaana uu haatan xiiso ka helayaa kooxda horyaalka Serie A ee AC Milan kaddib markii tababare Gennaro Gattuso uu qaab liita ugu bilaabay xilli ciyaareedka cusub.
AC Milan ayuu haatan agaasimaha ciyaaraha u yahay Ivan Gazidis oo ah shaqsigii ay mudada dheer kasoo wada talinayeen Arsenal tababare Wenger waxaana la fahamsan yahay inuu fure u noqon karo heshiiska ay Milan ku doonayso 69 jirkii hore ee Gunners.
Gazidis iyo Wenger ayaa mudadii ay kasoo arriminayeen Arsenal kusoo wada guulaystay koobab saddex ah waxaana xiisaha kooxda ree Talyaani hurinaya hadalkii uu Wenger ku sheegay inuu ugu dambayn 1-da January kusoo laaban doono shaqada tababarenimo.
AC Milan ayaan kali ku ahayn xiisaha tababarahan waxaana ay loolan kala kulmi doonaan kooxda horyaalka Chinese Super League ee Guangzhou Evergrande oo iyaga qudhoodu dhinac ka doonaya saxeexiisa.
Sidoo kale waxa hore u jiray xiiso uga imaanayay kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich oo xaalado aan wanaagsanayn ku furtay xilli ciyaareedka cusub ee 2018-2019 isla markaana ku hawlan raadinta tababare xal u noqon kara.
Si kastaba ha ahaatee, Haddiiba ay Milan caydhiso Gattuso oo haatan laba kulan oo kama dambays ah loo qabtay ayaa la filayaa inay booskiisa ku buuxiyaan Wenger oo mudo 22 sano ah kusoo dhex jiray kubadda cagta Ingiriiska.